Libanona : Fiarahamonina Sy Fifanoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 6:42 GMT
Misy fitomboana be aok'izany ny tontolon'ny bilaogy Libaney. Midika izany fa tsy feno tanteraka ity famintinana atolotra ato ity. Ary amin'ny fiezahana te-hamoaka maro araka izay tratra ireo blaogy vaovao na bilaogy vao hita vao haingana, dia misy lahatsoratra hafa mahaliana sy/na bilaogy tsy hita ato. Nefa afaka ataonao foana ny mahita rohy mankany amin'ireo blaogy mendrika any anatin'ireo famintinana teo aloha na koa miverena mijery eto isan-kerinandro.
Ny faran'ny herinandro lasa teo no faran'ny volana fifadian-kanina amin'ny Ramadan na Eid al Fitr, ary mankalaza izany fotoana izany Amal miaraka amin'ny endrika tsy faly loatra izay mampiseho ny toe-draharaha ao amin'ny faritra : (teny Arabo ny soratra amin'ny sary milaza hoe “Mirary Fety Sambatra “)
Tsy lohahevitra malaza natao ho resahina ao Libanona akory ny raharahan'ireo Jiosy Libaney. The Jews of Lebanon no bilaogy miresaka manokana ity lohahevitra ity. Ao amin'ity lahatsoratra ity ny mpanoratra no mamintina sy manakiana ilay boky “Jews of Lebanon (Jiosy ao Libanona) : eo anelanelan'ny fiarahamiaina sy ny fifandirana” ka manambara fa ireo Jiosy Libaney no andrin'ny fampiroboroboana ny fahaleovantenan'ny firenena.
Misy vondrom-piarahamonina Palestiniana ao Libanona. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpitsoa-ponenana nanomboka ny taona 1948. Ary izao no lazain'i Hilal momba azy ireo :
Izahay, amin'ny maha-Libaney anay, no antony iray mahatonga ny fahantran'ny Palestiniana ao Libanona ANKEHITRINY. Olana amin'ny maha-olona tsotra izao ilay izy. Tsy maintsy jerentsika ny laharam-pahamehantsika ara-etika. Na raha tsy izany, azafady ry Libaney, aza mitaraina noho ny “tsy fahalalàna” sy ny “fanaovana mahery fihetsika” ao anatin'ireo toby, fa ny vokatry ny “fomba fijery ara-etika” anananareo tsotra izao ireny.
Ery amin'ny tsipika faran'ny ambany, tsy manaikitra ny Palestiniana. Afaka mandeha ao amin'ireo toby ianao ary mijery ny fomba fiainan'izy ireo ka miverena ary lazao ahy ny fahitanao izany.
Tao anaty fanamarihana iray hafa tanteraka no misy an'i Carpet Techno izay mifantoka manokana amin'ny fanoratana bilaogy momba ireo teknolojia vaovaon'ny Libaney. Manana tetikasa iray tena mahaliana antsoina hoe LebPedia izy : ilay Rakipahalalana Libaney. Wiki momba ny Libanona io, izay afaka alain'ny rehetra. Ary mitady mpilatsaka an-tsitrapo maro izy hanomboka hampiditra votoaty ao..
Raha iverenana ny any amin'ny fitiavan-tanindrazana, nanoratra lisitra lava be i Free Cedar momba ny ‘fifanoherana’ izay mahatonga an'i Beirut ho maha-te ho tia :
Tiako i Beiroty noho ireo fifanoherany. Tiako i Beirut satria mahita ankizivavy iray mitafy zipokely aho miaraka amin'ny rahavaviny manao Tchador. […]
Tiako i Beiroty satria izaho no voalohany miantso ny namako silamo rehefa Ramadany ary izy ireo no voalohany miantso ahy rehefa Paska.
Tiako i Beiroty satria ny 1 Mey dia mahita ny Silamo mitsidika an'i Harissa aho (Maria Virjiny) tahaka ny ahitako ny kristiana.
Tiako i Beiroty satria afaka manavaka ny Jiosy sy ny Isiraeliana isika.
Tiako i Beiroty satria isaky ny faha 22 amin'ny volana dia hitako ireo Miozolomana mankany St.Charbel amin'ny finoana fa hisy fahagagana hitranga.
Tiako i Beiroty satria raha vantany vao tonga any amin'ny iray amin'ireo namako aho dia avy hatrany mitondra ahy any an-dakozia ny renin'izy ireo ary lasa mpitondratenin'ny vata fampangatsiahana
Tiako i Beiroty satria afaka manimbolo gardenià sy jasmina ny olona. […]
Tiako i Beiroty satria miditra ao anaty dobo filomanosana ny vehivavy na dia feno “maquillage” aza.
Tiako i Beiroty satria tafiditra ao ireo ankizilahy miaraka amin'ny sigarany.
Tiako i Beiroty satria nopotehina im-7 raha ny ara-tantara kanefa niharina hatrany.
Kanefa etsy ankilan'izany, niseho ho toy ny ohatra iray i JoseyWales amin'ny fiakaran'ny tahan'ireo Libaney ratsy vintana izay nandao ny firenena ary tsy nieritreritra ny hiverina intsony.
Misaotra anao Andriamanitra. Manolotra fisaorana anao an-tapitrisa aho Andriamanitra noho ny nahafahako nivoaka sy nanalavitra ny tanindrazako feno adalàna.
Nianiana aho indray andro fa tsy hametraka ny fitoniako sy ny an'ny fianakaviako ho eo an-tanan'ireo adala tsy ampy traikefa mitondra an'i Libanona sy ny filaminany. Ary isanandro mahazo fanamafisana aho fa tokony hifikitra mafy amin'izany, mafimafy kokoa hatrany, amin'izany fanapahankevitro izany.
Na izany aza, mbola manohy mandefa ny sarin'ireo toerana tsara indrindra mendrika ho tsidihina ao Libanona i Burned . Ny farany izao dia mikasika ireo toerana fikorisàna “Ski” izay atolony miaraka amin'ny sary.
Tsy misy fiafarany mihitsy ireo tantara lava taorian'ilay ady. Indrindra miaraka amin'ny fahitàna zava-baovao isanandro.. Nampahatsiahy an'izao tontolo izao i Nisrine hoe i Israely dia niaiky ny fampiasana fitaovam-piadiana nisy faosfaoro (phosphore) tamin'ny volana Jolay 2006 :
Taorian'ny fandavana nahatsiravina sy ny fikorontanan'ny fampielezam-baovao, neken'ny manampahefana israeliana ihany ny fampiasana baomba nisy faosfaoro tamin'ilay ady nalaza nampalahelo tamin'ny Jolay. Fanamelohan-tena ny fiekena tao amin'ny ABC momba ny lojikan'ny lalàna. Araka izany, ny ao an-tsain'ny olona manan-tsaina rehetra taorian'ireny fanafihana maharikoriko ireny, dia meloka araky ny fiekena nataony i Isiraely. Noho izany dia tokony hosaziana araka ny lalàna iraisam-pirenena i Isiraely.
Mampalahelo fa tsy handray andraikitra i Zeneva sy ireo fifanarahany. Tsy hisy ny sazy hampiharina. Tsy hisy mihitsy ny fepetra fisorohana, na sazy, na fepetra hafa ho raisina. Hanao maso be tsy mahita sy hitapin-tsofina ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena ka hamela an'i Isiraely hipetraka eo ambonin'ny lalàna iraisam-pirenena rehetra.
Ho an'i Remarkz, antony ara-tontolo iainana, fa tsy antony ara-politika na ideolojika,no ao ambadiky ny lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe “Anti-Americanism”(manohitra ny fomba fisaina Amerikana).
Farany, misy karazanà fo samihafa na fifanoherana firy no inoanao fa misy ? Maya[ao]amin'ny NYC no manana angona mahaliana amin'izany :
Misy ny fo vita amin'ny vy. Mibiloka izy fa tsy tapaka mihitsy. Tsy hita mihitsy ny kiaka aminy. Ny harafesina no mety haka ny hatsarany. Ary indray andro hifoha hahita ny harafesina amin'ny fanahiny izy ireo. Iza no te-hiaina amin'ny fo vy ?
Misy fo vita amin'ny fingotra. Mihevotra isaky ny milatsaka ry zareo, mety ho kiaka eo ambony, kanefa tsy dia lalina loatra ny pilaka eo aminy. Misy feony migobona be izy rehefa mihevotra, ary mitantara amin'ny olon-drehetra ny diany. Iza no te-hanana fo fingotra?
Misy ny fo vita amin'ny kristaly. Manjopika ny fijery azy, mahatsiaro ho manjopika ry zareo, manjopika ny feony. Ary iza no milaza fa manjopika ny halemena? Raha vao misy dona mafimafy dia simba ilay fo.Tsy ho azo soloina intsony. Iza no te-hanana fo kristaly ? […]